Shirkadda Golis Telecom oo abaalmarin lacageed siisay kooxdii ku guulaysatay horyaalka kubada cagta Puntland | Golis Telecom Somalia
Shirkadda Golis Telecom oo abaalmarin lacageed siisay kooxdii ku guulaysatay horyaalka kubada cagta Puntland
Shirkadda Golis Telecom oo marka laga kaalayo hawlaha ganacsiga isgaarsiinta hadana kaalin mug leh ka qaadata qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada ayaa abaalmarin lacageed oo dhan $3000 (sadex kun oo dollar) ugu deeqday kooxda Bari FC oo ku guulaysatay horyaalkii kubadda cagta Puntland ee sanadkan ka socday gobalada Puntland.
Xafladda gunaanadka tartankan oo lagu qabtay Hotel Jubba ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka qayb galay masuuliyiinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, wasiiro ka tirsan dawladda Puntland, ciyaartooy, masuuliyiin ka socotay waaxda suuqgaynta iyo xiriirka dadwaynaha ee shirkadda Golis iyo masuuliyiin kale.
Gudoomiyaha Xidhiidhaka kubada cagta Soomaaliya Cabdiqani Saciid Carab oo kalmad ka yiri munaasabaddan ayaa si wayn ugu mahadceliyay shirkadda isgaarsiinta Golis oo uu xusay inay xil wayn iska saartay arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha had iyo jeerna garab istaagta isagoo ugu baaqay inay gabi ahaanba la wareegto looguna magac daro horyaalka kubadda cagta Puntland.
Maxamuud C.salaan Maxamed oo kasocday xafiiska suuqgaynta iyo xiriirka dadwaynaha shirkadda Golis oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in Golis ay mar walba dareen gaar ah siiso ayna saaxiib dhaw la tahay dhalinyarada iyo ciyaaraha si buu yiri ay dhalinyardu uga mashquulaan waxyaabaha aan wanaagsanayn ayna uga dhaxlaan is-dhexgal iyo caafimaad.
Ugu dambayn wasiirka shaqada, shaqaalaha, dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda Puntland C/rixmaan Shiikh Axmed oo soo xiray xafladda ayaa bogaadiyay doorka wanaagsan ay kulahayd shirkadda Golis intii uu socday horyaalka kubadda cagta Puntland ilaa gabagabadiisi oo maanta loo fadhiyay, waxa uuna ugu baaqay ganacsatada kale inay iyana kaalintooda qaataan oo ay telaabada Golis u noqoto kudayasho wanaagsan.
Ciyaartooyda Kooxda Bari FC oo madasha ku gudoomay Jeeg-gii lacagta dhan $3000 ee ay Golis ugu deeqday kadib dadaalkoodi waynaa ee ay usoo galeen hanashada koobka horyaalka kubadda cagta Puntland waxana wajiyadooda laga dheehan karay farxad aan erayo kooban lagu micnayn Karin.
Xafiiska Suuqgaynta iyo xiriirka dadwaynaha